ကုန်ကြမ်း Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် (1689-64-1) - Phcoker
SKU: 1689-64-1 အမျိုးအစား: စမတ်မူးယစ်ဆေး
ကုန်ကြမ်း Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် (1689-64-1) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် (1689-64-1) ဖျေါပွခကျြ
ကုန်ကြမ်း Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် (1689-64-1) fluorene တစ်ဦးအရက်ဆင်းသက်လာသည်။ အထင်ရှားဆုံး isomer, fluoren-9-ol သို့မဟုတ် 9-hydroxyfluorene ခုနှစ်, hydroxy အဖွဲ့နှစ်ခု benzene ကွင်းအကြားပေါင်းကူးဆက်သွယ်ကာဗွန်အပေါ်တည်ရှိပါတယ်။ Hydroxyfluorene ဓာတ်တိုးခြင်းဖြင့် fluorenone ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအခန်းအပူချိန်မှာအစိုင်အခဲရောင်စုံအဖြူရောင်မုန့်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကုန်ကြမ်း Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့်အိပ်ခြင်းနှင့် inattention တန်ပြန်တစ်နိုးနိုးကွားကွား-မြှင့်တင်ရန်အေးဂျင့်သည်။ နိုးနှင့်တပ်လှန့်နေတာရှည်မစ်ရှင်အပေါ် Airforce လေယာဉ်မှူးကအသုံးပြုတဲ့ဒြပ်ပေါင်းများ - ဒါဟာ (စ Provigil အဖြစ်လူသိများ) modafinil တစ်ခု analogue နှင့်လိုလားသူမူးယစ်ဆေးပါပဲ။ Hydrafinil (ခေါ် 9-Fluorenol) ကိုလည်း Modafinil မှအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်အလွန်ဆင်တူသောဝတ္ထု eugeroic nootropic ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမူလကနိုးနိုးကွားကွားနှင့်ရွှင်လန်းမြှင့်တင်ရန်သုတေသနဒြပ်ပေါင်းအဖြစ်တီထွင်ပေးခဲ့သည်။ ကြောင့် eugeroic အေးဂျင့်အဖြစ်က၎င်း၏အစီရင်ခံထိရောက်မှု၎င်းထိုသို့အဆင့်မြင့် nootropics အသုံးပြုသူများသည်အကြားရေပန်းစားဖြစ်လာနေသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအသုံးပြုသူများ Modafinil ထက်လျော့နည်းလှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုသတင်းပို့ပေမယ့်သတိဝီရိယမြှင့်တင်ရန်ကြီးမြတ်သောစွမ်းရည်။ အခွားသောအကြိုးကြေးဇူးမြားအာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်တို့ပါဝင်သည်အစီရင်ခံ, လှုံ့ဆျောမှု, သိမ်မွေ့စိတ်ဓါတ်များတိုးတက်မှု, တိုးတက်လာသောသိမြင် function ကိုနှင့်သင်ယူနိုင်စွမ်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ကုန်ကြမ်း Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် (1689-64-1) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့်
9-Fluorenol; Fluoren-9-ol; 9-Fluorenyl အရက်; 9-hydroxy-9H-fluorene; 9-Hydroxyfluorene;
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား မွှေးကြိုင်, ပတ်ဝန်းကျင်, SMART မူးယစ်ဆေးဝါး
CAS အရေအတွက် 1689-64-1
InChIKey AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C13H10O
မော်လီကျူး Wရှစ် 182.222 g / mol
အရည်ပျော် Point 153-156 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ရေဆူမှတ် 275.62 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (ကြမ်းတမ်းခန့်မှန်းချက်)
Hydrafinil (9-Fluorenol) တစ်ဦးpplication ဆေးပညာ, ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများ, အစားအစာ, အဖျော်ယမကာ, အလှကုန်, ဇီဝနှင့်ဓာတုဓါတ်ကူပစ္စည်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကုန်ကြမ်း Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် (1689-64-1) fluorene တစ်ဦးအရက်ဆင်းသက်လာသည်။ အထင်ရှားဆုံး isomer, fluoren-9-ol သို့မဟုတ် 9-hydroxyfluorene ခုနှစ်, hydroxy အဖွဲ့နှစ်ခု benzene ကွင်းအကြားပေါင်းကူးဆက်သွယ်ကာဗွန်အပေါ်တည်ရှိပါတယ်။ Hydroxyfluorene ဓာတ်တိုးခြင်းဖြင့် fluorenone ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် (1689-64-1) အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များယန္တရား?
လုပ်ဆောင်ချက်၏တိကျသောယန္တရားမသိရသေးပေ။ သို့သော်အနည်းငယ်တတ်နိုင်သမျှယန္တရားများအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ် Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့်က dopamine neurotransmitter ၏အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးဆိုလိုတာကအားနည်း dopamine reuptake inhibitor အဖြစ်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါယုံကြည်ကြသည်။
ဒုတိယအကြောင့် Hydrafinil (9-Fluorenol) တစ်ဦး serotonin 5-HT6 အဲဒီ receptor ရန်အဖြစ်ပြုမူကြောင်း hypothesised ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 5-HT6 receptors ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် (CNS) တွင်တည်ရှိသည်နှင့်ကသူတို့ရဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ် Paradigm အတွက်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုဆီသို့ဦးတည်နိုင်မပုံပေါ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, serotonin နှင့်၎င်း၏ system ကိုသိမြင်မှုနှင့်အမူအကျင့်နှစ်မျိုးလုံးကိုထိန်းချုပ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်, Hydrafinil (9-Fluorenol) ၏အသုံးပြုမှုကိုအောက်ပါအစီရင်ခံတင်ပြသည့်အပျော့စားစိတ်ဓါတ်များတိုးတက်မှုအချို့ကိုဒီစနစ်မှစွပ်စွဲနေကြသည်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား of Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် (1689-64-1)
အကြံပြုထားသည် Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် (1689-64-1) သောက်သုံးသော
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်က၎င်း၏ဆိုးကျိုးများနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာကြပါပြီတစ်ကြိမ်ကတိုးမြှင့်တဖြည်းဖြည်းထို့နောက်အသေးဆုံးထိုးမှာစတင်နိုင်ရန်အစဉ်အမြဲကောင်းလှ၏။ Hydrafinil အမှုန့်များ၏ပုံမှန်အတိုင်းဆေးထိုး 50 မှ 100 သောက်သုံးသော သာ. ကောင်းသည်မဟုတ်ဒီသောက်သုံးသောကျော်, တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာ mg ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး of Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် (1689-64-1)
Hydrafinil အမှုန့်များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ရေဓါတ်ခန်းခြောက်များပါဝင်သည်။ အစာစားချင်စိတ်များဆုံးရှုံးမှုတိုင်ကြားမှုများလည်းအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။